Ezi zinto zintathu zibalulekileyo zokuthambisa ubuso | Amadoda aQinisekileyo
Zintathu kuphela iikhrimu ozifunayo kwigumbi lakho lokuhlambela
UMiguel Serrano | | Zokuthambisa, Ukunyamekela
Okwangoku kukho amawaka eentlobo zeekhrim zobuso, ezinenjongo ezininzi. Nangona kunjalo, ukugcwalisa igumbi lakho lokuhlambela ngeemveliso akuyi kwenza ukuba ubuso bakho bubonakale buthambile kwaye bukhanya ngakumbi. Kuya kuthatha indawo kuphela kwaye kuthabathe ipinki elungileyo yeakhawunti yebhanki ukuphela konyaka.
Unokongeza ezinye ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho ezithile (amabala, amabala, iipore ...), kodwa ngokusisiseko indawo yokugcina yakho yobuhle yanele kwaye ishiyeke kwezi cream zintathu.
Ukususela kwiminyaka engama-30 ulusu luphelelwa ngamandla alo kunye nokomelela. Ityala likwiimeko zokusingqongileyo (ngakumbi ukukhanya kwelanga kunye nongcoliseko) kunye nokwehla kwamanqanaba e-collagen anxulumene nokwaluphala, okuthetha ukuba awuphilisi ngokudinwa ngokulula njengangaphambili. Iyeza: sebenzisa into yokuthambisa ene-sunscreen kusasa kunye nekhrim yokulwa ukuguga ngaphambi kokuba ulale.
Nangona zihlala zihoywa, izikhuhluzi KUFUNEKA (ngoluhlobo, ngoonobumba abakhulu) kwinkqubo yokuzilungisa yamadoda. Kwaye kukususa iiseli ezifileyo kuphela kwendlela yokutyhila ungqimba olutsha nolukhanyayo lolusu. Ukongeza, ichitha ii-blackheads ezimnyama kwaye ishiye ulusu luthambile, into, le yokugqibela, eya kuthi enkosi iqabane lakho ngayo. Yisebenzise amaxesha ambalwa ngeveki, ugxininisa eyona ndawo iroughest; kodwa hayi, kuba ulusu lunokuba bomvu kwaye lucaphuke.
Unyango lweliso lokuguga
Ukuba ufuna ubuso bakho bukhangeleke bungenasiphako, kubaluleke kakhulu ukuba uthintele inyawo losiba kunye nezangqa ezimnyama. Kakhulu ubuthathaka, ulusu olujikeleze amehlo luqala ukushwabana kwaye ludumbise emva kweminyaka yamashumi amathathu. Sebenzisa unyango lwamehlo oluguga yonke imihla ukugcina amehlo akho esemncinci njengomoya wakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zintathu kuphela iikhrimu ozifunayo kwigumbi lakho lokuhlambela
Eyona tracksuit ipholileyo yeMidlalo yayiyeyeRussia
Ixesha 'detox': detoxify umzimba wakho ngale recipe eyenziwe ekhaya